Forex News | Nhepfenyuro Dhepfenyuro kubva kuMarikiti yeMari neFXCC
musha / About / Nezve FXCC / Company News
Company News & Trading Zviziviso
FXCC inofara kuzivisa kupfuurira kweMushandirapamwe wedu wepurogiramu
Nokuda kwechido chakakwirira mumushandirapamwe wekutsvaga, FXCC inofadza kuzivisa vatengi vedu uye vashandi pamwe navo kuti Bhizinesi inopa ichaenderera mberi munaOctober.
Ikusimudzirwa kwebhonasi inotarisira kupa mubairo vatengi vedu vatsva pamwe nevatengi vedu vakavimbika nekubatanidza bonus 100% Kutanga-Up ne 50% Mari yebhadharo yemari imwe neimwe yakaitwa mukati memwedzi! Uye izvi hazvisi zvose - pamabasa ose akaita kuti vatengi vedu vawane zvikwereti, apo tinopa mubairo vatengesi vedu vakavimbika nemari chaiyo, inotora mari.
Wakagadzirira kushandisa zvinyorwa zvekusimudzirwa uku here? Click pano kuti uitange kana iwe usina rekodha zvakare.
Vatengi vatove nekambani neFXCC uye vanoda ku kubatana nekusimudzirwa vakagamuchirwa chero nguva yekureva bhonasi!
* Ndapota tsvagai Mitemo Nezvigaro zvemashoko ekusimudzirwa kweBonus.
FXCC inotanga nzvimbo itsva yekugamuchira vashandi vasiri EU
Sechikamu chekuenderera mberi kwedu kuwedzera kukura kwedu kwenyika yose uye kuwedzera basa redu kunyika dzose, FXCC yakazarura webhusaiti yekutengeserana itsva iyo inobatsira vatenzi vedu vasiri EU, kana vashandi vekuEurope vasina kutengesa kubva kuU EU Chinangwa ndechekuti kupa zviri nyore kuwana zvigadzirwa zvedu nemabasa, tichichengetedza nzvimbo yakachengeteka yekutengesa kune vatengi vedu.
Tichifunga nezvenhamba inowedzera yevatengesi vanopinda mumisika ye forex, takatora basa kuti tibatsire kutengeserana kwemaitiro, tipe zvinhu zvakasiyana-siyana zvekutengeserana uye zvigadzirwa, tichisimbisa pachena uye kutendeseka panguva dzose.
Kuva imwe yemakambani anogamuchirwa uye anovimbika munharaunda iyi, chinangwa chedu ndechokugonesa vatengi vedu kuwanika kumusika wepamberi pavanenge vachitengesa nemumwe mutengesi wemutemo.
China Union Pay kutanga kweChina chinotengesa vatengesi
Tangotanga kuudza imwe mari yekubhadhara uye mari yekugadzirisa mari yekushandisa kuburikidza nesangano reChina Union Pay. Mukugadzira hukama hutsva huno tinozarura gedhi, tichibvumira vatengesi vatsva nevanotambira FX kubva kunyika dzeAsia dzakadai seChina, kuti vatengese zvakananga kuburikidza neFXCC ye ECN FX model model.
China UnionPay yakasimbiswa mu2002, kambani iko zvino yakakura zvishoma nezvishoma mumakore gumi nemashanu chete. China Union Pay zvikamu zvitatu semupi webasa rekubhadhara, maererano nekutengeswa kwegore negore kushandiswa, shure kwe MasterCard neVisa. Nemhaka yekutsigirwa kwayo kubva kuhurumende yeChina yeCUP yakave iyo inofanirwa kubhadhara mupiro webasa remakona mana makuru eChinese emabhizimisi emhuri.
Sezvo vakawanda vanozivikanwa uye kazhinji vachitaura nezve "Union Pay" kana kuti "CUP", mutapi webasa iye zvino akabudisa makirogiramu mabhiriyoni mashanu munyika yose. China Union Pay ikozvino nzira yakagamuchirwa yekubhadhara munyika dzinopfuura 150 uye sezvo 2009 Union Pay cardholders yakwanisa kuwana maInjini emunyika mu UK uye kushandisa makadhi avo kuti zvive nyore kubuda muEurope.
China Union Pay nokukurumidza yakave iyo yakagamuchirwa uye yakagamuchirwa nzira yekubhadhara mari yevanhu vekuChinese kuti vawane marongerwo enyika anotengeserana. China Union Pay yakave iyo inokosha uye chikamu chinokosha chekambani yebhangi yebhangi. Vakatorawo basa rinokosha mubasa rose rekushanda kwemakadhi emakadhi muChina.
PaFXCC tiri kugara tichinetseka kuti tive nekuvandudza mune zvose zvese zvebhizimisi redu rekambani. Nenzira iyi tinoramba tichicherechedza mashizha emari ekutsvaga nzira itsva yekubhadhara mabhuku, kuitira kuti vatengi vedu vashandise mari dzavo nyore nyore, kana kuti vatange kuzarura mabhuku matsva, kuitira kuti vatengese FX kuburikidza nedura redu reMetaTrader platforms.